Isibuyekezo se-Mansion Casino Ibhonasi Yokwamukela efinyelela ku-R50,000
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-mansion casino
Isibuyekezo se-Mansion Casino
Isofthiwe:Betsoft, Playtech, Red Tiger Gaming, Spinomenal, Pragmatic Play
Ibhonasi Lokukwamukela:Ize ifike R50,000 Ibhonasi Lokukwamukela
I-Mansion Casino yethulwe ngo-2004 futhi inikela ngemidlalo engaphezu kuka-350 ekhasino eku-inthanethi ongakhetha kuyo. Abadlali banenketho yokulanda isoftware yekhasino noma bakhethe ukudlala ngokushesha. Ungadlala imidlalo yomthengisi bukhoma, imidlalo yetafula, imidlalo ye-arcade, ama-progressive jackpots, i-video poker, ama-casino slots nokuningi. Ngasikhathi sinye, ibhonasi yokwamukela inhle kakhulu, kuyilapho amabhonasi aqhubekayo nawo emnandi. I-Mansion Casino inikeza ukuxhaswa okungu-24/7 ukuphendula noma imiphi imibuzo, ebusuku noma emini.
2021 Amakhodi Webhonasi Okwamukela e-Masnion Casino
Idiphozi yokuqala Ibhonasi engu-100% yomdlalo efinyelela kuma-R10,000
Idiphozi yesibili Ibhonasi engu-50% yomdlalo efinyelela ku-R50,000 yediphozi ka-R15,000 +
Amakhodi We Bhonasi ye Diphozithi Engekho
Ibhonasi engekho idiphozi ayinikezwa eMansion Casino ngalesi sikhathi.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Mansion Casino
I-Mansion Casino ivame ukuba namabhonasi amasha, futhi ihlala izama ukushintshanisa ama phromoshini njalo. Nasi isifinyezo sokuthi yini ongayinikezwa:
Wild Wednesdays Ngekhodi lebhonasi i-HUMPDAY, abadlali bayakwazi ukuthola imali engu-R300 kubhange labo.
Beat The Dealer Wina kufika ku-R15,000 uma ushaya i-blackjack. Uma ushaya ama-blackjacks amathathu elandelana, uzothola u-R7,500. Shaya amajackpots amane elandelana uzothola uR15,000.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Mansion Casino
Uma ufisa ukudlala imidlalo yemali yangempela, kuyadingeka ukusetha i-akhawunti entsha ye-Mansion Casino. Abadlali abasha bangabhalisela i-akhawunti entsha ngemizuzu nje embalwa. Uma i-akhawunti yakho isisethiwe, khetha indlela yakho yasebhange, ufake imali yokuqala, bese uyadlala.
Ukuqala ukubhaliswa kwakho nge-Mansion Casino, qala uchofoze kusithonjana se-‘Joyina ‘ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi eliyisiqalo. Kuzovela ukubhaliswa okuyizingxenye ezintathu. Lokhu kudinga ukuqedwa ngemininingwane yakho yangasese, oxhumana naye kanye ne-akhawunti.
Yamukela imigomo nemibandela, bese uvumelana nenqubomgomo yobumfihlo. Ungakhetha futhi ukuthola imininingwane yebhonasi nokunye ukuxhumana okuvela eMansion Casino. Chofoza ku-‘Joyina Manje ‘futhi usuqedile.
Ukungena ngemvume, mane uchofoze kusithonjana esimnyama se-‘Ngena ngemvume ‘ekhoneni eliphezulu kwesokudla sekhasi eliyisiqalo. Faka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Chofoza ‘Ngena ngemvume’.
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala e-Mansion Casino
I-Mansion Casino yaziwa kakhulu ngokusebenzisa onjiniyela abasezingeni eliphezulu besoftware.
Kukhona uhla olubanzi lwama slots azodlalwa e-Mansion Casino kusuka kuma-reel amathathu asezingeni eliphakeme kuya kuma-reel amahlanu nakho konke okunye okuphakathi. Uma kufakwa imidlalo emisha, banikezwa umaki ukuze abadlali bakwazi ukuyithola kalula. Lokhu kusho ukuthi lapho iMansion Casino inemidlalo emisha ongayizama, akudingeki ukhathazeke ngokulwela ukuyithola. Eminye yemidlalo ephezulu ongayijabulela njengamanje ifaka i-Roman Power ne-Banana Drop.
Kukhona nezimpande eziqhubekayo, ezinembiza yokuqoqa, ezingakuthola izigidi zeRandi! Okuthrendayo manje eMansion Casino yiPhoenix Fire, Wings of Ra, Mega Pyramids, Wild Cats Multiline neWin Escalator.
Uzothola ukuhluka okuningi nezinguqulo zakudala zemidlalo yetafula lesithonjana njenge-blackjack, i-poker, i-roulette, i-baccarat, nokuningi eMansion Casino. Uma ukhetha okuhlangenwe nakho okungokoqobo kwekhasino, ungajabulela nokukhethwa kwemidlalo yetafula enomthengisi obukhoma.
I-Mansion Casino inokukhetha okuhle kakhulu kwezihloko zabathengisi ezibukhoma zabadlali abazama ngazo. Abadlali baseNingizimu Afrika bazokhungathekiswa yinqwaba yamabhande wabathengisi abahlukene ahlanganisa imidlalo eminingi yetafula esezingeni eliphakeme. Lokhu kufaka phakathi izinhlobo ezibukhoma ze-blackjack, i-roulette ne-baccarat.
I-Mansion Mobile Casino: Iqhathaniswa Kanjani i-Masino Casino Kumakhalekhukhwini?
I-Mansion Casino isebenzisa i-HTML5 yekhasino yayo ephathekayo, okusho ukuthi inikeza abadlali ngensizakalo esezingeni eliphakeme yeselula. Isayithi lesiphequluli seselula liyatholakala kuwo wonke amadivayisi wesimanje, ngakho-ke noma ngabe unani ephaketheni lakho, uzokwazi ukusebenzisa kalula i-Mansion Casino usohambeni.
Isiza ngokwaso sakhiwe kahle kakhulu. Empeleni isebenzisa umklamo ofanayo kunguqulo yedeskithophu yesayithi. Lokhu kusho ukuthi noma ngubani odlale kudeskithophu uzokwazi masisha isayithi leselula le-Mansion Casino. Ungafinyelela ingxenye enkulu yemidlalo yasekhasino, futhi ungenza noma yisiphi isenzo ongalindela ukuthi ukwazi ukusenza kunguqulo esezingeni lesayithi.
Ngingayi dawuniloda i-Mansion Casino efonini yami?
I-Mansion Casino iyatholakala njengokudlala okusheshayo, noma ungalanda isoftware kuyo yomibili i-PC yakho kanye nomakhalekhukhwini. Ukudlala ngokushesha, mane uvule isiphequluli sewebhu kuselula yakho, uye kuwebhusayithi yeMansion Casino, ngena ngemvume bese uqala ukudlala. Uma ungenayo i-akhawunti, usengabhalisela i-akhawunti usebenzisa ifoni yakho ephathekayo. Qinisekisa ukuthi kufakwe isiphequluli sewebhu, njengeSafari noma iGoogle Chrome, kanye nokuxhumeka okuthembekile kwe-inthanethi.
Izindlela Zokuhoxa Ezamukelwa e-Mansion Casino
Visa Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-5
Mastercard Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-5
Maestro Yebo Izinsuku zebhizinisi eziyi-3-5
paysafecard Yebo Amahora angu-24
Izindlela Zoku Diphozitha Ezamukelwe e-Mansion Casino
Inhlangano ye-Mansion Casino kanye nemininingwane yokuxhumana
Ulwazi oluvamile le-Mansion Casino
Ukuxhaswa Kwamakhasimende e-Mansion Casino
Kusungulwe: 2004 Inombolo yamahhala ye-SA: Cha
Opharethwa yi: The Mansion Group Email: [email protected]
Ilayisensi: IGibraltar Licenseing Authority / iKhomishini Yezokugembula yase-UK Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Izinzuzo nezindleko ze-Mansion Casino
- Imfuneko yokubheja ephansi engu-20x - Amaphromishini alinganiselwe okuncane okunikezwayo okwamanje
- Ukwesekwa kwamakhasimende kuyatholakala 24/7 - Ayikho ibhonasi yediphozithi ayitholakali
- Kufika ku-R50,000 ibhonasi yokwamukela
- Uhlobo olusheshayo lokudlala nokulanda yeselula ne-PC
Yini Eyenza I-Mansion Casino Ukhethe Oluthandwa Abadlali BaseNingizimu Afrika?
IRandi laseNingizimu Afrika liyimali eyamukelekayo
Ukukhetha okuhle kwemidlalo yasekhasino eku-inthanethi
Isipiliyoni sama casino abukhoma
Uhlobo olusheshayo lokudlala nokulanda olutholakala kuselula naku-PC
Ukukhetha okuhle kakhulu kwamabhonasi okwamukela
Izikhalazo se-Mansion yase Ningizimu Afrika
Ungaba nezihloko eziningi zama-slot
Ukubambezeleka kancane kunqubo yokuhoxa
Ngabe iMansion Casino isemthethweni eNingizimu Afrika?
I-Mansion Casino isemthethweni futhi ilawulwa yiGibraltar Licensing Authority kanye ne-UK Gambling Commission.
Ngiyikhipha kanjani imali kwi-Mansion Casino?
Konke okudingeka ukwenze ukwenza indlela yakho uye esigabeni se-akhawunti lapho ungene ngemvume. Ukusuka lapha, uzokwazi ukufinyelela izindlela zakho zokuhoxa ezitholakalayo. Kunezindlela eziningana zokufaka nokukhipha imali.
Yini i-Mansion Casino?
I-Mansion Casino iyikhasino eku-inthanethi enikeza abadlali ukufinyelela kukhetho olukhulu lwemidlalo yekhasino eku-inthanethi. Kulawulwa ngokuphelele futhi kunikezwa ibhonasi enhle yokwamukela nokukhushulwa okujikelezayo. Ungadlala ngokushesha noma ulande isoftware kwiselula yakho noma kwi-PC.
Ngubani ophethe i-Mansion Casino?
I-Mansion Casino iphethwe futhi iqhutshwa yi-The Mansion Group
Ingabe i-Mansion Casino inezici zokubheja ezemidlalo?
I-Mansion Casino ayinikezeli ngesici sokubheja kwezemidlalo.
Ngabe iMansion Casino inikela ngohlelo lwe-VIP?
Iklabhu le-VIP le-Mansion Casino ubulungu obuqotho obukhethekile obunezici ezinhle kakhulu nezinzuzo. Ezinye izinzuzo zokuba umdlali we-VIP zibandakanya ukuba nomphathi we-akhawunti yakho siqu, amaphromoshini we-VIP akhethekile futhi ulayishe kabusha, ukuhoxa ngokushesha okunemikhawulo ephakeme, izipho ezikhethekile, ukufinyelela kumicimbi ekhethekile ye-VIP, imikhawulo ephakeme yediphozithi nemikhawulo ephezulu yokubheja. Kunezigaba ezinhlanu ezihlukene ze-VIP: iBronze, iSiliva, iGolide, i-VIP ne-Elite VIP. Ukuphakama kwe-VIP tier yakho, kuzokwenza ngcono izinzuzo zakho.
Yiziphi izidingo zokubheja e-Mansion Casino?
Ukunikezwa kwebhonasi ejwayelekile yeMansion Casino kunikela ngemali yebhonasi yamahhala yemidlalo yamakhadi, ama-slots, i-video poker, nokunye okuningi. Ibhonasi inesidingo sokubheja esingu-20x kuphela.
I-Mansion Casino iphinde inikeze ibhonasi ye-casino yamahhala, efana nediphozi yakho ne-150% emalini yebhonasi futhi inemikhawulo ephezulu kakhulu. Izidingo zokubheja zaleli bhonasi ngu-15x.
Ngaphezu kwalokho, ikhasino inikezela ngebhonasi eyamukelekile yomdlalo wetafula, evuza umdlali ngama-chips wamabhonasi angabhejwa.